DAAWO: Kamaradaha Old Trafford Oo Qabtay Bruno Fernandes Iyo Antonio Oo Xamanaya Pogba Markii Uu Kubadda Gacanta Ku Qabtay - Gool24.Net
DAAWO: Kamaradaha Old Trafford Oo Qabtay Bruno Fernandes Iyo Antonio Oo Xamanaya Pogba Markii Uu Kubadda Gacanta Ku Qabtay
Paul Pogba ayaa noqday dhibbanaha ay ku dhacday canaanta kulankii ay Manchester United barbarraha la gashay West Ham United ee garoonka Old Trafford, kaddib markii kubad uu soo laagay Declan Rice oo isaga ku beegnayd uu gacmaha iskaga difaacay xilli uu ku jiray xerada ganaaxa.
Rikoodhe loo dhigay West Ham ayuu gool ugu beddelay Michail Antonio, laakiin Manchester United ayaa bilowgii qaybta dambe heshay goolka barbarraha oo uu u dhaliyey Mason Greenwood, taas oo keentay in Red Devils ay kaalinta saddexaad ee horyaalka gasho.
Chelsea oo dhaafi lahayd ayey Liverpool ka badisay, sidoo kalena Leicester City ayaa u dhacday kaalinta shanaad oo min hal dhibic ka dambaysa United iyo Blues kaddib guul-drradii ay Tottenham u xambaarisay.
Kubadda cagta kaga dhacday Pogba ayaa laga soo hubiyey VAR, waxaana intii garsooraha iyo ciyaartoyduba ay sugayeen in la xaqiijiyo rikoodhaha, isku soo dhowaaday Michail Antonio iyo Bruno Fernandes iyadoo aanu Paul Pogba ka fogeyn.
Labadan ciyaartoy ayey kamaraduhu qabteen iyagoo xamanaya, kuna qoslaya ficilka uu sameeyey Pogba, iyadoo laacibka reer France uu meel aan ka fogeyn taagnaa oo uu arkayay inay isaga ka maadsanayaan.
Antonio ayaa sheekada bilaabay oo Burno Fernandes u sheegay sida uu Pogba sameeyey iyo sidii ay ahayd inuu kubadda iskaga difaac, waxaana usoo dhowaaday Fernandes oo dhegta u saaray hadal ay labadooduba ku qosleen.
Jamaahiirta Manchester United iyo halyeeyadii hore ee Red Devils ayaa iyaguna baraha bulshada ku karbaashay Pogba, laakiin xiddiga reer France ayaa raalli-gelin ka bixiyey ficilkiisa sababay rikoodhaha, waxaana xilligii nasashada uu qolka lebbiska ka sheegay inuu ka xun yahay falkaas.
Halkan ka daawo sidii ay Fernandes iyo Antonio u xanteen Pogba oo arkaya: